‘म’ अपाङ्ग महिला हुँ तर, १४ बर्ष देखि नियमित से’क्स गर्ने गरेकी छु ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/‘म’ अपाङ्ग महिला हुँ तर, १४ बर्ष देखि नियमित से’क्स गर्ने गरेकी छु !
११ वर्षको उमेरमा प्रेम : मितराका अनुसार उनी ११ वर्षको हुँदा आफ्ना एक छिमेकीका छोराका लागि विशेष भावना महसुस गरेकी थिइन् । उनी भन्छिन्, ‘यो भावनाको अर्थ मैले त्यतिबेला बुझ्न सकेकी थिइनँ ।’ उनी भन्छिन्, ‘त्यतिबेला म आफूलाई मान्छे नै होइन ठान्थें । अ’पाङ्गताका कारण मेरो बाँच्ने अधिकार नै छैन जस्तो लाग्थ्यो । म ‘मृ’ त्युको प्रतिक्षा गरिरहेकी थिएँ ।’
मितरा आफ्नो पेन्टिङ बेचेर गुजारा गर्छिन् : मितरा भन्छिन्, ‘हामीले विश्वास गर्नुपर्छ कि हामी पूर्ण रुपमा बाँच्नका लागि हकदार छौं । हामीले अ’पाङ्गताको वास्ता नगरी यसको पूरा आनन्द लिनुपर्छ ।’
यौ न आवश्यकता पूरा नहुनु हानिकारक : मितरालाई आफ्नो भावना र आवश्यकतालाई जाहिर गर्न पाउँदा गर्व भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘अहिले पनि धेरै मानिसहरु यो कुरामा विश्वास गर्छन् कि अपाङ्ग महिलाले आफ्नो यौन र भावनात्मक आवश्यकता व्यक्त गर्नु हुँदैन तर सत्य भने फरक छ ।’
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असोज १२ गते सोमबारको रा’शिफल